तिथि मेरो पत्रु » यो5महिला बनाउने बिग डेटिङ गल्तिहरु
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 25 2020 |5मिनेट पढ्न
तपाईं डेटिङ खराब समय लिइरहनुभएको छ?
तपाईं दिनांक को स्कोर मा जाने र अनलाइन मानिसहरू धेरै कुरा गर्न लाग्न गर्नुहुन्छ तर तपाईं एक जडान बनाउन वा आफ्नो मान्छे को पूरा गर्न लाग्न कहिल्यै?
यो तपाईं '5 बिग डेटिङ गल्तिहरु' को एक वा बढी गर्दै छन् संभावना छ त भने. यहाँ छन्5महिला बनाउन ठूलो डेटिङ गल्तिहरु, र सट्टा के गर्न.
1. एउटा कार्यसूची संग दृष्टिकोण डेटिङ
मेरो महिलाहरु ग्राहकहरु को त्यसैले धेरै एक एजेन्डा संग डेटिंग दृष्टिकोण र यो साँच्चै तिनीहरूलाई र डेटिङ आफ्नो सफलता विरुद्ध काम गर्दछ. तिनीहरू मानिस खोज्दै हुनुहुन्छ, र तिनीहरूले सीधा मान्छे तुरुन्त बर्खास्त र जडान अन्वेषण गर्न अर्को मिति को मौका बिना बन्द लेखिएको हुन्छ तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने मानिसहरूको कुनै पनि उहाँलाई देख्न छैन भने (वा यसका कमी) थप. र मिति चरण प्राप्त गरे भने उनीहरूले, स्त्रीको सन्तोषजनक परिणाम भन्दा कम संग साथ आफ्नो मिति कि एजेन्डा वहन.
यो डेटिङ गर्दा एजेन्डा छैन भन्न counterintuitive लाग्न सक्छ, सबै पछि पक्कै हामी मिति सारा कारण 'आफ्नो मानिस' सही पूरा गर्न छ? कुनै र हाँ खैर. अन्ततः र लामो अवधि यो इच्छा छ, तपाईं एक एजेन्डा संग डेटिंग जानुभयो भने तपाईं एकदम कि चरण रही को आफ्नो अवसरहरुमा कम तथापि. कफी लागि विपरीत सेक्स सदस्य वरिपरि पूरा गर्न र हुन मौका - खेल मा यस चरण मा यो कुराको लागि डेटिङ हेर्न उत्तम छ, चल्छ, यति कुराहरु र. मान्छे मा आऊ - एक विवाह साक्षात्कार - यो सिर्फ तिथि'S, त्यसैले एक सानो बिट आराम गरौं र जस्तै यो व्यवहार. यो कुनै एक सभाबाट आफ्नो जीवन साथी एक कृत्रिम सेटिंग मा छ कि तपाईं जान्न सक्छौं भनेर आशा गर्न यस्तो अव्यावहारिक दृष्टिकोण छ.
तपाईं महिलाहरु को लागि डेटिङ मेरो दृष्टिकोण थाहा छ भने तपाईं म सिफारिस थाहा हुनेछ चिकित्सा रूपमा डेटिङ खराब सम्बन्ध पैटर्न खारेज लागि. तर यो डेटिङ भन्दा धेरै रमाइलो र दिल प्रकाश हुन अर्थ छ. तपाईं बाहिर पा बारेमा एक एजेन्डा संग जाने भने यो छ भने आफ्नो मानिस यसले सम्पूर्ण अवस्था मा दबाव को एक टन हाल्छ, र तपाईं न त आफ्नो मिति न आराम र अनुभव रमाइलो गर्न सक्षम हुने अर्थ. तपाईं आफ्नो सबै भन्दा राम्रो आत्म हुन सक्षम हुने छैन र न त त्यो हुनेछ. नयाँ छ - त्यसैले एउटा नयाँ एजेंडे ड्रप र बनाउन, नयाँ मान्छे संग मजा र प्रकाश भावनाका अनुभवहरू.
2. पुरुष बाहिर पनि चाँडै शासन
पहिलो ठूलो गल्ती जस्तै, गल्ती2डेटिङ गर्दा महिला खुट्टा आफूलाई गोली अर्को तरिका हो. आजको समाजमा थुप्रै पश्चिमी महिला 'रसायन' यो मानिसहरूसँग आफ्नो छनोटहरू गर्न आउँदा तिनीहरूले महसुस शासन छन्, र म यो फेरि समस्या समय र समय सबै प्रकारका मा उनलाई प्राप्त देख्न. रसायन एक मानिस तपाईं राम्रो साथी हुनेछ कि एक गरीब सूचक हुन अप्ठ्यारो. वास्तवमा तीव्र रसायन विगतमा ठूलो सम्बन्ध छनौट गरेका छैनौं महिलाका निम्ति एउटा चेतावनी संकेत अक्सर छ. अक्सर असल मानिसहरू भयातुर र पहिलो मिति मा अप्ठ्यारो किनभने पुरा तरिकाले बेवास्ता गर्न सक्छन् र तिनीहरूले रसायन विभाग मा एक मुक्का प्याक छैन. महिलाहरु को लागि आकर्षण एक असल मानिस संग समय बढ्न सक्छ. त्यसैले त्यो अप्ठ्यारो वा शान्त मानिस अर्को मौका दिन, वास्तवमा उहाँको धेरै छोटो मितिमा दिन र उहाँले तपाईं को लागि बाहिर आफ्नो खोल आएको र आकर्षक मानिस परिणत छैन भने देख्न, सायद 'आफ्नो मानिस'. तपाईं अहिले कि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि चिन्ता छैन (गल्ती देख्न 1).
3. एक सूची संग मिति दृष्टिकोण
गल्ती3गलती यस्तै छ 1 र जसरी हानिकारक, यदि पनि बुरा. म धेरै महिलाहरु उनि चाहनुहुन्छ गुणहरू को विश्वसनीय 'सूचीबारे' छ भनेर थाह (वा तिनीहरूले चाहनुहुन्छ विचार) एक मानिस मा. तपाईं आफ्नो आदर्श साथी महिलाहरु मा चाहनुहुन्छ के स्पष्ट रही संग केहि पनि गलत छ, तथापि तिनीहरूलाई केही समवेदना हराउँदै छन् र सबै तपाईं सेवा छैन किनभने, हाम्रो सूची वास्तविकता मा प्राप्त गरौं!
सूची अक्सर धेरै लामो छ र सामान्यतया यो वास्तवमा आफूलाई संग टकराव कि त्यहाँ मा कुराहरू छ! उदाहरणका लागि त्यो छ 'शान्त र ढल्कियो' सही अर्को 'भावुक र ऊर्जावान' गर्न सक्छ. अब म तिमीलाई एक व्यक्ति मा ती सबै गुणहरू छन् सक्दैन भन्ने होइन, यो सामान्य मानिसले अन्य एक तिर अप्ठ्यारो बस भनेर हो. जो त्यसैले यो छ? साथै हाम्रो सूची कहिलेकाहीं त मामुली हो मा कुरा छ, यस्तो 'टाटु' वा 'मांसपेशीहरु' रूपमा. महिलाहरु चलो! त्यहाँ शारीरिक प्राथमिकता भएको मा खराबी छ, तर तपाईं साँच्चै उहाँले आफ्नो शरीर मा मसी छ कि छैन आफ्नो जीवन साथी चयन जाँदैछन्? तपाईं यस तपाईं आफ्नो जीवन लागि सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध ल्याउने होला? गुणहरू के त्यो साँच्चै कुरा, यस्तो इमानदारी, वफादार, दया, बल (मन) र यति मा?
प्रत्येक स्त्रीले महत्त्वपूर्ण छ के निर्णय छ. तर समय र समय फेरि म एक महिला अन्तमा उनको जीवन साथी भेटिन्छ जब बाहिर फालिएको हुन सूची देखेको छु, र त्यो सामान्यतया त्यो उनको सूची मा थियो मानिसलाई अलग छ! अनि ऊ खुसी छ. त्यसैले मेरो सल्लाह - सूची बाहिर फेंक! अथवा, तपाईं यो हुनै पर्छ भने, बस अधिकतम यो कटौती5सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणहरू. एक सामान्य पुस्तिका नहीं एक सूचीबारे रूपमा यो प्रयोग.
4. धेरै मुश्किल प्रयास
तिमी अन्त कसैले भेटे त्यसैले तपाईं जस्तै, तपाईं उहाँसित मितिमा बाहिर छन् र तपाईँलाई भयातुर महसुस. त्यसैले तपाईं के गर्छन्? तपाईं कुरा. कुराकानीमा एक अंतर छ भने तपाईं यो भर्न. तपाईं अर्को कहाँ जाने सुझाव, के तपाईं गरेका छन् यात्रालाई कहानिहरु उहाँलाई चकाचौंध, उहाँलाई आफ्नो चम्किलो बुद्धि देखाउने र तपाईं आफ्नो हास्य मा टांके उहाँको छ. अनि पाठ्यक्रम तपाईं मिति आफ्नो आधा लागि तिर्न प्रस्ताव, वा सायद तपाईं पनि सारा बिल प्राप्त - तपाईं सबै पछि एक आधुनिक महिला छन्. अनि यो ठूलो रहेको गर्नुपर्छ! उहाँले तपाईं संग हाँसिरहेका छ, र सम्बन्ध छ, तपाईं यो महसुस गर्न सक्छन्. तर, त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ कहिल्यै. उहाँले चिसो जान्छ र तिथिहरु को एक जोडी पछि गायब. त्यसैले के गलत गए?
खैर अधिकांश पुरुषहरु डेटिङ मा पुरुषत्व भूमिका खेल्न गर्न रुचाउँछन्, के तपाईं माथि को सबै वा कुनै पनि गरिरहेका छन् भने र वास्तवमा यो भूमिका उहाँलाई धक्का, अर्थ तपाईं भावनात्मक तपाईं मा निवेश गइरहेको तिनलाई रोक्छ. तिनीहरूले केही प्रयास मा राख्न जब पुरुषहरुको आकर्षण र प्रतिबद्धता भावनाहरू tripped मिल. तपाईं आकर्षक भएर यो अधिकांश पुरुषहरु संग दीर्घकालिक मा दूर प्राप्त छैन तर आकर्षक छन् सोच्न सक्छन्. उहाँले तपाईं संग समय आनन्द उठाउन सक्छ, उहाँले तपाईं संग हाँस्न सक्छ र पनि दोस्रो मिति हुन सक्छ, थप प्रयास मा राख्न तिनले छ जसलाई अर्को 'कठिन' महिला - तर उहाँले अरू कसैले गर्न सुम्पिदिनुभयो अन्त गर्न संभावना छ.
उहाँले कुराकानी प्रमुख एक हुनु आवश्यक, तपाईं मनोरंजन र स्थल सुझाव. तपाईं ट्रिगर गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो गहिरो भावना उहाँलाई नेतृत्व गरौं र पालन गर्न पर्याप्त बलियो हुन. आराम र उपस्थित भएर र सट्टा अनुभव आनन्द उठाइरहेका अभ्यास.
5. एउटा आइस कन्या हुनुहोस्
एक बरफ कन्या हुनु पनि कडा परिश्रम गरिरहेका गर्न फ्लिप पक्ष छ. केही महिला गल्ती नम्बर थाह4र त्यसैले तिनीहरू अन्य चरम गर्न ले र पनि चासै र उपलब्ध हुन. तिनीहरूले 'हार्ड प्राप्त गर्न' र 'उच्च मूल्य' को लागि जाने भए तापनि, धेरै दूर लिएका भने यो दृष्टिकोण तपाईं बेसरोकार हो कि बन्द आउन सक्छ, उपलब्ध, विरोधी र पनि snobby. यो धेरै मानिसहरूलाई एक बिट चिसो महसुस गर्न सक्छन्, र अधिकांश पुरुषहरु एक बरफ कन्या संग धेरै जुरुक्क दिनेछु, ती बाहेक पीछा चुनौती मा बस चासो राख्ने, उहाँले पीछा मा छ एक पल्ट तपाईं ड्रप र अर्को स्त्रीलाई मा सार्न संभावना छ रूपमा र मानिसको यस प्रकार चाहँदैनन्.
/ ढल्कियो भइरहेको बीच सन्तुलन हुन चासो र खुला हुनुको अझै पनि उहाँलाई नेतृत्व दिँदै र त्यहाँ आवश्यक. तपाईं यस सन्तुलन प्राप्त गर्न सक्छन् भने सही तपाईं डेटिङ ठूलो समय हुनेछ. सम्झना गर्न मुख्य कुरा बस आफैलाई हुन छ. आफैलाई भित्र साँच्चै बलियो जाओ र आफ्नो छाला मा आरामदायी प्राप्त. डेटिङ वास्तवमा तपाईं यस संग मदत गर्न सक्छ!
त्यसैले त्यहाँ बाहिर जाओ र सबै माथि पनि व्यक्तिगत डेटिङ लिन छैन. तपाईं अन्य व्यक्ति को लागि भइरहेको छ के थाहा कहिल्यै. मजा 'अभ्यास' जस्तै यो व्यवहार र यो तपाईं को लागि काम गर्नेछन्.